Mitsitsia amin'ny dianao - Torohevitra momba ny dia taorian'ny virus coronavirus | Vaovao momba ny dia
Ho avy ny fialantsasatra! Torohevitra hitahiry amin'ny dianao aorian'ny virus coronavirus
Nandroso hatrany izahay ary, rehefa avy niaina ny krizy ara-pahasalamana lehibe indrindra noho ny coronavirus, dia mendrika ny hiala sasatra izahay. Mazava ho azy, rehefa dinihina fa tsy te-hamela ho antsika irery isika, dia manolotra andiana torohevitra hitsitsy amin'ny dianao, izay tsy azonao hadino.
Satria fantatsika fa ny paosy dia nanohina be taorian'ny volana vitsivitsy. Fotoana mety hanamafisana ny fehikibo eto amintsika fa tsy hanaovana veloma ny fety. Afaka manaraka dingana maromaro isika ary ho hitantsika ny fomba ahafahana mankafy nefa tsy mandany vola be. Te hahafantatra ve ianao?
1 Ahoana ny fomba hitsitsiana ny dianao: misafidy toeran-kaleha akaiky
2 Fizahan-tany ambanivohitra, hevitra tsara ho an'ny fialantsasatrao
3 Karatra manampy anao hitahiry mihoatra ny noeritreretinao
4 Manaova fisafidianana ireo tranombakoka sy hetsika tsy andoavam-bola
5 Manofa moto
6 Mamandraha mialoha
Ahoana ny fomba hitsitsiana ny dianao: misafidy toeran-kaleha akaiky
Ny akaiky dia fomba fitsitsiana amin'ny dia ataonao ary miaraka amin'izay dia manampy ny olona rehetra mila izany. Noho izany, raha tokony handroso lavitra dia aleo mijanona eo akaikin'ny trano ihany. Na firenena aiza ianao na avy aiza, azo antoka fa hisy toerana ao izay mbola tsy namanginao. Eny, izao no fotoana mety indrindra hampialana voly ny tenanao! Fomba iray hanombohana indray ny toekarena ary ao anatiny no ahitanao ny tolotra sy safidy mora vidy kokoa noho ny eritreretinao. Samy miandry anao sy ny fianakavianao ny faritra an-tendrombohitra sy amoron-dranomasina. Avelanao handositra izy ireo?
Fizahan-tany ambanivohitra, hevitra tsara ho an'ny fialantsasatrao
Manalavitra ny valalabemandry dia hevitra iray hafa tiantsika ity. Ho fanampin'izany dia hahita tolotra be dia be amin'ity sehatra ity koa izahay. Sehatra iray izay efa manapoaka ny azy famandrihana ho an'ny volana Jolay. Angamba ny tombony tena lehibe manasongadina amin'ity fitsitsiana ity dia ny fahafahanao tonga amin'ny fiaranao manokana. Ka tsy tokony handany vola amin'ny tapakilan'ny fiaramanidina koa isika ohatra. Raha vantany vao tonga any amin'ny toerana alehanao ianao dia hanana safidy hifaneraserana amin'ny natiora, fitsangantsangana na fanaovana spaoro mahazatra any ivelany. Azo antoka fa misy renirano miandry anao handroboka tsara koa.
Karatra manampy anao hitahiry mihoatra ny noeritreretinao
Niresaka momba ny toeran-kaleha sy ny safidy azo ampiharina izahay fitsangatsanganana taorian'ny coronavirus. Noho izany, eo amin'izy ireo dia tsy afaka nanadino ny iray amin'ireo fitaovana ilaina amin'ny fototra isika. Fa inona izany? Avy amin'ny karatra Bnext. Karatra manampy anao hitahiry vola rehefa mikasa ny vakansy tsara indrindra ianao, raha avy any Espana ianao dia afaka manao izany raiso ny karatra Bnext afaka tanteraka. Etsy andaniny, ny milaza fa tsy andoavanao komisiona ianao na dia mandoa vola hafa aza na misintona vola amin'ny ATM.
Ho fanampin'ny zava-misy fa karatra sy kaonty tsy andoavam-bola io dia hohadinoinao ny mandoa ireo hetra izay ananan'ny ankamaroan'ny banky. Miaraka amin'ny Bnext dia afaka misintona vola amin'ny ATM ianao na any Espana na any ivelany. Fa io hoe ankoatr'izay dia azonao atao koa mandefa na mangataka vola amin'ny alàlan'ity karatra ity, maimaim-poana indray.
Raha avy any Mexico ianao, ianao maka Maimaimpoana 100 pesos rehefa manakarama ny Karatra Bnext , izay manampy anao amin'ny karazana fividianana an-tserasera (manana karatra virtoaly misy ianao mba hahatonga ny fandoavanao ho azo antoka kokoa) na fandoavam-bola hafa isan'andro, mba hitsimbinana kely (miaraka amin'ny karatra ara-batana misy anao koa izay tsy mifandray amin'ny haitao). Ho fanampin'ny fitahirizam-bola amin'ny kaomisiona, azonao atao ny mahazo cashback amin'ny fampiasana Bnext fotsiny mba handoavana ny marika tianao indrindra toa ny Spotify, fivarotana Apple ...
Manaova fisafidianana ireo tranombakoka sy hetsika tsy andoavam-bola
Azo antoka fa any amin'ny toerana nofidinao ihany koa no hisy toerana hijerena, maimaim-poana izany. Ny sasany amin'ireo tranombakoka dia manana tapakila maimaim-poana indray andro isan-kerinandro toy ny Alahady, safidy iray izay azontsika araraotina ihany koa. Any amin'ny faritra hafa dia hanana hetsika ho an'ny vondrona na fianakaviana maimaim-poana ianao na amin'ny vidiny mihena. Be dia be fotsiny ny famotopotorana kely ny faritra hodinihintsika ary azo antoka fa hahita safidy tena tsara hodinihina isika.
Na dia tsy te hahalala be momba ny ao an-trano aza ianao dia hevitra hafa iray amin'ny fitsangatsanganana ity. Satria araka ny efa nolazainay fa mila toeran-kaleha akaiky izahay dia tsy handratra izany tonga miaraka amin'ny fiara na miaraka amin'ny tranontsika any aoriana. Ho an'ireo mpandeha rehetra manana izany dia arahaba arahaba ary ho an'ireo izay tsy manana dia hijanona hatrany ny fanofana. Hiankina amin'ny maodely safidintsika foana izany fa afaka manomboka amin'ny 100 euro ny vidiny. Tokony ho ao an-tsaina fa ao anatiny dia hanana izay rehetra ilaintsika isika, sady hiala sasatra no ho afaka hihinana. Tadidio koa fa amin'ireo fividianana rehetra ireo dia manana ny karatra Bnext ianao, izay manampy foana.
Marina fa hatramin'ny andro vitsy lasa izay dia tsy afaka nanao izany dingana izany isika. Fa ankehitriny fantatsika ny fivoaran'ny zava-drehetra, tonga ny fotoana hanaovana famandrihana. Ka tsy mampaninona antsika ny mandrindra ireo safidy ary manapa-kevitra haingana. Fotoana tsara hanaovana mahita tolotra ary ambonin'izany rehetra izany, mba hahazoana antoka fa ny toerana ahafahantsika maka izany fitsaharana sahaza izany dia hatramin'ny Jolay, Aogositra na hatramin'ny septambra aza. Manangona ny kitaponay ve isika?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » soso-kevitra » Ho avy ny fialantsasatra! Torohevitra hitahiry amin'ny dianao aorian'ny virus coronavirus
Bath, toerana tena anglisy